China on Aug. 29 handed over a weir, a nutrition garden and orchard to the Shauke community in Zvishavane, Zimbabwe as part of efforts to boost food security and build the community's resilience to climate-induced shocks.
"As an all-weather friend of Zimbabwe, China fully understands the importance of agriculture for Zimbabwe, and is more than willing to support Zimbabwe in its efforts to increase food production and attain food security," the ambassador said.
He said China-Zimbabwe agriculture cooperation was facing new golden opportunities with Zimbabwe's launch of command agriculture scheme this year aimed at boosting food production in the country.
The Chinese envoy said more Chinese companies were keen to invest in Zimbabwe's agriculture sector, with the southern African country poised to start citrus exports to China soon.
"The Shauke weir community garden and orchard is a prime example of the innovative ways that WFP, with support from China and in partnership with the government of Zimbabwe, is doing in Zvishavane to empower people to build their future," Rowe said.
The garden will produce a variety of vegetables for household consumption and for sale to generate income to improve the community's livelihoods.